China Procaine / Procaine Base CAS 59-46-1 ngwa ngwa ngwa ngwa nnyefe ngwa ngwa na ndị nrụpụta | Guanlang
Ngosiputa mma GSH l-Glutathione / lglutathione Powde ...
Trending Products China High Quality arọ Loss Pow ...
99% Ọcha Phmg Polyhexamethylene Guanidine Hydrochl ...
Akwa mma Valerophenone CAS 1009-14-9 si China ...
Procaine / Procaine Base CAS 59-46-1 n'efu ihe nlele fas ...
Safety nnyefe Phenacetin crystal ntụ ntụ, nke onwunwu pow ...
Boric Acid gbuputara CAS 11113-50-1 na ire ere ọkụ
Ọgwụ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ Tetramisole hydrochloride cas 5086 -...
Procaine / Procaine Base CAS 59-46-1 n'efu na-enyefe ngwa ngwa
Aha Chemical: Isi Procaine
CAS Mba.: 59-46-1
Usoro Molekụl: C13H20N2O2
Molekụla arọ: 236.310
Ọdịdị: hydrochloride ya enweghị agba, obere agịga dị ka isi ma ọ bụ kristal lobular, nwere uto ilu dị ntakịrị na nsị na-atọ ụtọ na ire.
Emeputa: Gutù Guanlang
Ọkwa: Dị na ngwaahịa
Zọ Mbupu: Express, Sea, Ikuku, Special ahịrị
Isi Procaine TDS
Ọdịdị Mmanụ achụ ya enweghị ntụpọ, obere agịga dị ka isi ma ọ bụ kristal lobular, nke nwere uto ilu na mmụọ uto na ire.
Njupụta 1,1 ± 0,1 g / cm3
Usoro Molekụl C13H20N2O2
Kpọmkwem àgwà 236.152481
Ọnọdụ nchekwa Nka na ụzụ: Na-emeso ya nke ọma. Yiri ngwá ọrụ nchebe kwesịrị ekwesị. Gbochie mgbasa nke ájá. Saa aka nke ọma mgbe ịmechara ya na ihu. Mara: Ọ bụrụ na ájá ma ọ bụ aerosol na-emepụta, jiri ihe na-ekpochapu obodo.
Ọnọdụ nchekwa: Debe akpa kpamkpam. Na-echekwa na jụụ, ọchịchịrị ebiet.
Chekwaa ihe ndị na-ekwekọghị ekwekọ dị ka oxidizers.
Kwụsie ike Ọ dị jụụ n'ozuzu. Mmiri na-agba agba na mmiri, ntakịrị soluble na ethanol, ntakịrị soluble na chloroform. Ngwọta mmiri ya adịghị agbanwe agbanwe, ọkachasị mgbe ekpughere ya n'ìhè, ihe ndị nwere acid-dị mfe imebi.
Isi Procaine Ojiji
Procaine nwere ike ịrụ ọrụ anestetiiki na mpaghara site n'ọtụtụ ebumnuche.
Nkụnwụ ahụ n’ógbè. Ngwaahịa a nwere ike ịkwado akpụkpọ ahụ sel ma belata ikike ya na ion, nke mere na mgbe akwara ahụ rutere, sodium na potassium ion enweghị ike ịbanye ma pụọ ​​na mpempe akwụkwọ ahụ iji mepụta ikike depolarization na ikike ime ihe, si otú a na-emepụta ọgwụ mgbochi mpaghara. Ngwaahịa a nwere ike ịbanye n'ime akpụkpọ ahụ mucous ma ọ gaghị adabara nhụjuanya n'elu, ma ọ nwere obere nsí na mmetụta a pụrụ ịdabere na ya. Ọ na-eji infiltration ná Nkụnwụ Ahụ. Enwere ike iji ọgwụ anesthesia na ọgwụ anidhesia mee ihe.
Isi Procaine Packaging na Mbupu
Mbukota: 20kg / drum, aluminum foil akpa ma ọ bụ katọn
25kg / drum, aluminum foil akpa ma ọ bụ katọn
Dị maka nlele iji.
Ọnụ ọgụgụ ahụ dị ka mkpa ndị ahịa si dị.
Nke gara aga: Nchekwa nnyefe Phenacetin kristal ntụ ntụ, na-egbuke egbuke ntụ finacetin CAS 62-44-2 nwere nnukwu sock
Osote: Akwa mma Valerophenone CAS 1009-14-9 si na ụlọ ọrụ China nke Valerophenone
Procaine Hcl ntụ ntụ
Ndị na-ere ọgwụ ọgwụ 4′-Meth ...
Elu àgwà Valerophenone CAS 1009-14-9 f ...